Maninona no tsara ho anao ny fihinana paoma maina?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-04-13
Ny paoma maina dia misoroka ny fitohanana ary mitazona anao ho lava mandritra ny fotoana maro. Fomba hafa fitehirizana ny voankazo matetika esorina ny atin'ny voan'ny voankazo. Fa tsy natao ho an'ny paoma maina. Ny iray amin'ireo tombony azo avy amin'ny paoma maina dia ny fonosana be dia be avy amin'ny fibres tsy mety levona sy tsy mety levona. Rano antsasaky ny kaopy ...
Ny paiso mamy sy be ranony dia iray amin'ireo fahafinaretana farany amin'ny fahavaratra, fa iza no tsara kokoa: fotsy sa mavo? Mizara roa ny hevitry ny ankohonantsika. Ny sasany maniry ny paiso mavo, mitanisa ny «tsiro peach mahazatra», fa ny sasany kosa midera ny hamamin'ny paiso fotsy. Manana prefere ve ianao ...
Ny voankazo maina dia voankazo izay nanala ny ankamaroan'ny atin'ny rano tamin'ny alàlan'ny fomba fanamainana. Mihena ny voankazo mandritra io dingana io ka mamela voankazo maina kely matevina. Anisan'izany ny manga, mananasy, cranberry, akondro ary paoma. Ny voankazo maina dia azo tehirizina ela be kokoa noho ny ...